Factory fandavahana Core Core. China Core Drilling Rig Manufacturer, mpamatsy
Ny rindran'orinasa karazana spindle dia apetaka amin'ny tranofiara misy jack jack hydraulic efatra, tsangambato miorina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso hydraulic, izay ampiasaina amin'ny fitrandrahana fototra, fanadihadiana tany, lavadrano kely ary fandavahana bitika diamondra.
Fikarohana ara-jeolojika, fitrandrahana jeografia ara-batana, fizahana arabe sy fananganana trano, ary lavaka fandavahana fantsona sns.
BW Series Pumps dia misy firafitry ny paompy piston marindrano miaraka amina tokan-tena, avo roa heny, ary triplex-piston, tokana ary mihetsika roa. Ampiasaina indrindra amin'ny fampitana fotaka sy rano amin'ny fandavahana ny fotony izy ireo. Fitrandrahana injeniera, fantsona hydrôlôjika sy rano, fantsakana solika sy etona. Azo ampiasaina amin'ny fampitana ranon-javatra samihafa amin'ny indostrian'ny solika, simia ary fikarakarana sakafo koa izy ireo.
Crawler Type Core ary atsofohy Rig
Ny rindran'orinasa karazana spindle core dia apetaka amin'ny mpandady, izay rig hydraulic azo entina amin'ny hafainganam-pandeha. Mihetsiketsika mora ireo drills ireo amin'ny famahanana hydraulic.
Rig fandavahana Core XY-1A
XY-1A fandavahana dia rig hydraulic azo entina amin'ny hafainganam-pandeha. Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa isan-karazany amin'ny fampiasana azo ampiharina be dia be dia be, mandroso ny maodely maodely XY-1A (YJ) izahay, izay ampiana amin'ny fidinana ambany; Ary fandoroana maodely XY-1A-4 mialoha, izay ampiana paompin-drano; rig, paompy ary motera diesel napetraka amin'ny fototra iray ihany.
Rig fandavahana Core XY-1B
XY-1B Drilling Rig dia famonoana fandavahana haingam-pandeha haavo hydraulic. Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fihinanana samihafa amin'ny alàlan'ny fampiasana betsaka, dia mandroso XY-1B-1, rig ary atsofohy izay ampiana paompin-drano. Ny rig, paompy ary motera diesel dia apetraka amin'ny fototra iray ihany. Mandroso ny fandavahana maodely XY-1B-2 izahay, izay ampiana amin'ny chuck ambany.
Rig fandavahana Core XY-2B
Ny rig fandavahana XY-2B dia karazana boribory hazo mitsangana, izay azon'ny motera diesel na motera elektrika ampiasaina amin'ny herinaratra. Ampiasaina indrindra izy io amin'ny fandavahana kely ny diamondra ary ny fandavahana ny fandriana miorina amin'ny karbida. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fikarohana ny fandavahana sy ny fandavahana ny lavaka.
Rig fandavahana Core XY-3B
Ny rig fandavahana XY-3B dia karazana boriborin'ny hazo mitsangana, izay azon'ny motera elektrika na ny motera diesel. Ampiasaina indrindra izy io ho an'ny fandavahana bitika karbida sy fandavahana farafara am-pandriana. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fikarohana ny fandavahana, ny fotony na ny fandavahana ny lavaka.
Ny rig fandavahana XY-44 dia ampifanarahana amin'ny fandavahana bitika kely ary ny fandavahana farafara karbida amin'ny fandriana matanjaka. Azo ampiasaina amin'ny geolojika injeniera sy fikarohana tany anaty rano koa izy io; menaka sosona mivaingana sy fitrandrahana entona voajanahary, eny fa na dia ny lavaka famohana rivotra na ny tatatra. Ny rig fandavahana dia misy fanamboarana matevina, tsotra ary mety. Mazava izy io, ary azo atambatra ary halefa mora. Ny elanelan'ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana dia manome fahombiazana amin'ny fandavahana.
Rig fandavahana Core XY-200B
Rig fandavahana Core XY-280
Ny rig fandavahana XY-280 dia karazana boriborin'ny hazo mitsangana. Izy io dia manome ny motera diesel L28 izay vita amin'ny ozinina maotera CHANGCHAI. Ampiasaina indrindra izy io amin'ny fandavahana kely ny diamondra ary ny fandavahana ny fandriana miorina amin'ny karbida. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fikarohana ny fandavahana sy ny fandavahana ny lavaka.
Ny fitrandrahana finday DPP100 dia karazana fitaovana fandavahana rotary napetraka eo amin'ny chassis an'ny kamiao diesel 'Dongfeng', mahafeno ny fenitra famoahana china IV ny kamio, ny fantsom-bokatra misy ny toeran'ny transposition sy ny fitaovana fananganana auxiliary, ny fandavahana omen'ny tsindry solika hydraulic.